ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဟောငျး ပေါလျအငျ့ဈ က ဒီနှဈနှရောသီမှာ ပေါငျ ၇၃ သနျး ဝနျးကငျြနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့တဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ ကစားသမား ဆနျခြို ရဲ့ ကစားပုံနဲ့ပတျသကျပွီး သတိပေးပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ ၇ ပှဲပါဝငျကစားပေးပွီးခြိနျမှာ ဂိုးလညျးမသှငျးနိုငျ ၊ ဂိုးဖနျတီးမှုလညျး မလုပျပေးနိုငျသေးတာကွောငျ့ ဆနျခြို အနနေဲ့ ဝဖေနျသံတှကေို ရငျဆိုငျနရေပွီလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ပေါလျအငျ့ဈ က ဆနျခြို ရဲ့ ခွစှေမျးကို ဝဖေနျခဲ့ခွငျးမရှိပမေဲ့ သူ့ရဲ့ကစားပုံကိုတော့ အခုလို ဝဖေနျပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
“ ဆနျခြို က ငယျရှယျသေးသလို အခုမှ သငျယူနတေုနျးဆိုတာကိုတော့ ကြှနျတျောနားလညျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ တကယျ့ဘောလုံးပှဲတှကေ ဖီဖာဂိမျး မဟုတျဘူးလေ။
ကစားသမား ၂ ယောကျ ၃ ယောကျ ၄ ယောကျလောကျကို လိမျခေါကျနိုငျအောငျပဲ ကွိုးစားနလေို့မရပါဘူး။
သူတို့ အဲ့ဒီလိုမြိုးတှေ လုပျပွတဲ့အခါ ကွညျ့လို့ကောငျးတယျဆိုတာတော့ ဟုတျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဆနျခြို နဲ့ လငျဂတျ တို့က ဒါမြိုးကို တခြိနျလုံးလုပျဖို့ပဲ ကွိုးစားနကွေတယျ။
ဘောလုံးကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ သသေခြောခြာပဲ ကစားကွစမျးပါ။
ရိုးသားစှာ ဝနျခံရရငျ အဲ့ဒီလိုကစားပုံတှကေ ကြှနျတျော့ကို စိတျမောစတေယျ။
ဂဈ လို ကစားသမားမြိုးရဲ့ ကစားပုံကို ခငျဗြားကွညျ့ကွညျ့လိုကျ ၊ သူတို့ ဘောလုံးလကျခံတယျ ၊ ဘောလုံးပွနျပေးတယျ ၊ ဝမျးတူးရိုကျကွတယျ ၊ တယောကျခငျြးတှရေ့ငျ ဖွတျကြျောကွတယျ။
ငါတို့က ဘောလုံးနဲ့အတူဆှဲပွေးနိုငျဖို့ပဲ ကွိုးစားခဲ့ကွတယျ။
နောကျပေါကျနဲ့ပေးပို့မှုတှေ ၊ လှညျ့ကှကျတှကေိုတော့ အနညျးငယျလောကျပဲ ကွိုးစားခဲ့ကွတယျ။
ကြှနျတျော မွငျရတာတော့ မာရှယျ လညျး ဆနျခြို လငျဂတျ တို့နဲ့ အတူတူပဲ။
ဘောလုံးကစားတာဟာ အလိမျအခေါကျလုပျနရေုံနဲ့မရဘူးဆိုတာကို သိဖို့အတှကျ သူတို့သငျယူဖို့လိုပါတယျ “ လို့ ပေါလျအငျ့ဈ က သတိပေးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ စိတျပကျြစရာ စှမျးဆောငျရညျတှကေို ပွသနတောကွာပွီဖွဈတဲ့ ပွငျသဈ တိုကျစဈမှူးမာရှယျ ရဲ့ ဝကျဈဟမျး နဲ့ ပှဲစဉျက ခန်ဓာကိုယျအပွုအမူတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး
ပေါလျအငျ့ဈ က “ မာရှယျ ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအပွုအမူတှကေို ကြှနျတျောကွညျ့ပွီး တှေးမိတာက “ ဗုဒ်ဓဟူးနညေ့တုနျးကပှဲမှာ သူတကယျပဲ ပါဝငျကစားပေးခငျြတာဟုတျရဲ့လား .? “ ပေါ့။
တခွား ကစားသမားတှလေညျး အဲ့လိုပါပဲ။
စနနေကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျမှာ ပါဝငျခှငျ့မရခဲ့တော့ သူတို့အနနေဲ့ “ ငါက ဘာလို့ ကာရာဘောငျးဖလားပွိုငျပှဲမှာမှ ကစားရတာလဲ .? “ ဆိုပွီး တှေးနကွေမှာပါ။
မာရှယျ ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအပွုအမူတှကေို ခငျဗြားသတိထားမိလောကျမှာပါ။ အဲ့ဒီပှဲကို သူပါဝငျမကစားခငျြခဲ့ဘူး “ လို့ ဝဖေနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဖီဖာဂိမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘောလုံးစကေးပြတာတွေကို တော်ရုံတန်ရုံပဲ ပြုလုပ်ဖို့ ဆန်ချို ကို ပေါလ်အင့်စ် သတိပေး
ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ပေါလ်အင့်စ် က ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ ပေါင် ၇၃ သန်း ဝန်းကျင်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဆန်ချို ရဲ့ ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၇ ပွဲပါဝင်ကစားပေးပြီးချိန်မှာ ဂိုးလည်းမသွင်းနိုင် ၊ ဂိုးဖန်တီးမှုလည်း မလုပ်ပေးနိုင်သေးတာကြောင့် ဆန်ချို အနေနဲ့ ဝေဖန်သံတွေကို ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပေါလ်အင့်စ် က ဆန်ချို ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ဝေဖန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ သူ့ရဲ့ကစားပုံကိုတော့ အခုလို ဝေဖန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ “ ဆန်ချို က ငယ်ရွယ်သေးသလို အခုမှ သင်ယူနေတုန်းဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ဘောလုံးပွဲတွေက ဖီဖာဂိမ်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ကစားသမား ၂ ယောက် ၃ ယောက် ၄ ယောက်လောက်ကို လိမ်ခေါက်နိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားနေလို့မရပါဘူး။ သူတို့ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်ပြတဲ့အခါ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန်ချို နဲ့ လင်ဂတ် တို့က ဒါမျိုးကို တချိန်လုံးလုပ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဘောလုံးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သေသေချာချာပဲ ကစားကြစမ်းပါ။ ရိုးသားစွာ ဝန်ခံရရင် အဲ့ဒီလိုကစားပုံတွေက ကျွန်တော့်ကို စိတ်မောစေတယ်။ ဂစ် လို ကစားသမားမျိုးရဲ့ ကစားပုံကို ခင်ဗျားကြည့်ကြည့်လိုက် ၊ သူတို့ ဘောလုံးလက်ခံတယ် ၊ ဘောလုံးပြန်ပေးတယ် ၊ ဝမ်းတူးရိုက်ကြတယ် ၊ တယောက်ချင်းတွေ့ရင် ဖြတ်ကျော်ကြတယ်။ ငါတို့က ဘောလုံးနဲ့အတူဆွဲပြေးနိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပေါက်နဲ့ပေးပို့မှုတွေ ၊ လှည့်ကွက်တွေကိုတော့ အနည်းငယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် မြင်ရတာတော့ မာရှယ် လည်း ဆန်ချို လင်ဂတ် တို့နဲ့ အတူတူပဲ။ ဘောလုံးကစားတာဟာ အလိမ်အခေါက်လုပ်နေရုံနဲ့မရဘူးဆိုတာကို သိဖို့အတွက် သူတို့သင်ယူဖို့လိုပါတယ် “ လို့ ပေါလ်အင့်စ် က သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စိတ်ပျက်စရာ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပြသနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူးမာရှယ် ရဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲစဉ်က ခန္ဓာကိုယ်အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပေါလ်အင့်စ် က “ မာရှယ် ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပြုအမူတွေကို ကျွန်တော်ကြည့်ပြီး တွေးမိတာက “ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတုန်းကပွဲမှာ သူတကယ်ပဲ ပါဝင်ကစားပေးချင်တာဟုတ်ရဲ့လား .? “ ပေါ့။ တခြား ကစားသမားတွေလည်း အဲ့လိုပါပဲ။ စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့တော့ သူတို့အနေနဲ့ “ ငါက ဘာလို့ ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာမှ ကစားရတာလဲ .? “ ဆိုပြီး တွေးနေကြမှာပါ။ မာရှယ် ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပြုအမူတွေကို ခင်ဗျားသတိထားမိလောက်မှာပါ။ အဲ့ဒီပွဲကို သူပါဝင်မကစားချင်ခဲ့ဘူး “ လို့ ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။